1. Kedu ihe bụ mgbaàmà nke arụ ọrụ erectile?
3. Vardenafil HCL (Vardenafil hydrochloride) -Denye aha
4. Kedu ka ọrụ Vardenafil Generic si arụ?
5. Ihe ị kwesịrị ịmara mgbe ị na-ewere vardenafil generic -Levitra interactions
6. Ogologo oge ole ka ọ ga-adịru mgbe ọ nwụsịrị Vardenafil?
7. Kedu ka esi ewe Levitra maka nsonaazụ kacha mma?
8. Esi zụta Vardenafil online?
9. Olee otú ịzụta n'enweghị ihe ị ga-eji zụọ ihe n'Ịntanet
10. Ihe Maara: Vardenafil Nyocha
11. Levitra vardenafil-Nchịkọta
Ọkpụkpụ Erectile nwere ike ịbụ otu n'ime ọnọdụ kachasị egwu mmadụ nwere ike inwe. Ọkpụkpụ ọbara dị na penis na-adị nnọọ warara nke na ọbara ọgbụgba na penis ezughị ezu n'ọnọdụ a. Nke a na - eme ka mmadụ ghara inwe ike ịkwado ụlọ ma ọ bụ enweghị ụlọ. Ejila otutu ụzọ mee ihe iji gbalịa ịgwọ ọnọdụ ahụ. Ụzọ ndị a bụ ma anụ ahụ ma ọ bụ site na ọgwụ. Ihe kacha ewu ewu ọgwụ na-egbu egbu na-erectile eji mee ihe maka nsogbu a bụ Levitra Vardenafil na Levitra Staxyn.
Erectionile dysfunction, nke a na - akpọkwa nkwarụ mmekọahụ, abụghị nnukwu nsogbu ọ bụrụ na ọ na - eme otu ugboro ma ọ bụ oge ruo n'oge. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọnọdụ ahụ na-aga n'ihu ogologo oge, nlekọta ahụike dị mkpa. Nke a bụ n'ihi na ọ nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama na enwere ike ịnweta nsogbu ahụike ọzọ.
Kedu ihe bụ mgbaàmà nke arụ ọrụ erectile?
Ọtụtụ akụkụ nke ahụ mmadụ na-emetụta agụụ mmekọahụ nke nwoke. Ndị a gụnyere hormones, ụbụrụ akwara ụbụrụ, arịa ọbara, na mmetụta uche. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla dị n'elu nwere nsogbu, enwere ike imetụta ụlọ ahụ n'ime mmadụ. Ọrịa Erectile pụkwara ịkpata ahụike na nchekasị. Ndị na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime ọnọdụ ndị nwere ike ịkpata nkwụsị erectile.
Alcoholism na ọgwụ ọjọọ
Ọrịa ma ọ bụ surgeries na-emetụta mpaghara pelvic
Ọrịa nke Erectile na-emewanye ka ndị agadi. Nke a na-akọ na National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases
Ọgwụ maka nsogbu ndị ọzọ dị ka ọrịa cancer prostate
Ọnọdụ uche dịka ịda mbà n'obi na nchekasị
N'ozuzu, ma usoro ahụike na nke anụ ahụ kpatara nsogbu a. Nchịkọta nke nsogbu ndị a na - akpata ma ọ bụ na - ewute nsogbu ahụ.
Ọkpụkpụ Erectile nwere ike iduga nsogbu ndị dị ka enweghi afọ ojuju n'inwe mmekọahụ, enweghị ike ịhapụ ụmụaka, nsogbu mmekọrịta, nchegbu, nchekasị, ihere na nkwanye ùgwù onwe onye.
Vardenafil nwere ike inyere mmadụ aka ịnweta ya.
Na ọgwụgwọ ọgwụgwọ ọrịa na-erectile, otu n'ime ọgwụ ndị kasị ewu ewu ma dị irè bụ Levitra (Vardenafil Generic). Ọ na-abịa n'ụdị Levitra Staxyn. Ọ bụ Nri na Ọgwụ Ọgwụ (FDA) akwadoro ọgwụ a ka a jiri ya na-emeso ndị ikom nwere ike inwe mmekọahụ. Levitra dị n'ụdị ọgwụ ndị a na-akpọ phosphodiesterase-5 (PDE-5) nke na-arụ ọrụ site n'ịkwụsị ọrụ nke enzyme dị n'akụkụ akụkụ dị iche iche dị ka mkpịsị ugodi ahụ.
Ọ na-abata ma ọ bụ mbadamba mbadamba ma ọ bụ mbadamba ụrọ. Mbadamba mpempe akwụkwọ adịghị mkpa mmiri ka ọ na-agbaze n'ime ọnụ na ọnụ. Na mgbakwunye na ịgwọ agụụ mmekọahụ, vardenafil generic ka amarakwa na ọ bụ ihe ngwọta maka ịchịkwa ejaculations maka ụmụ nwoke. N'ozuzu, nsogbu nke ejaculation gụnyere ejaculation azụ, oge ejaculation aka, mmegharị azụ na oke ọdịda ejaculation.
Vardenafil HCL (Vardenafil hydrochloride) -Denye aha
Aha ugwo maka vardenafil bu Vardenafil HCL (vardenafil hydrochloride). Ọ bụ pyrazine akpọpụtara 1 - [[3- (1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo [5,1-f] [1,2,4] triazin-2-yl) -4-ethoxyphenyl] sulfonyl] -4-ethyl-, monohydrochloride. Vardenafil HCL fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe siri ike na-enweghị atụ nke na-atụle 579.1G / mol. A na-eme Levitra n'onwe ya dị ka mbadamba ụrọ na-acha odo odo kpuchie ihe nkiri ma nwee "BAYER" imewe n'otu akụkụ. N'akụkụ nke ọzọ, edere ha: "20", "10", "5", ma ọ bụ "2.5" nke na-egosi ọnụma nke vardenafil kwekọrọ na mg. Vardenafil bụ ihe na-arụsi ọrụ ike. Na mgbakwunye na nke a, mbadamba nke ọ bụla nwekwara titanium dioxide, uzo uzo uhie uhie, colloidal silicon dioxide, microcrystalline cellulose, magnesium stearate, polyethylene glycol, odo ferric oxide, na crospovidone na hypromellose. O nwere nọmba CAS nke (224785-91-5) na usoro ihe omuma nke a: Ngwakọta SARM na Top 10: SR9009 (1379686-30-2)
Kedu ka ọrụ Vardenafil Generic si arụ?
Ka e nwee ụlọ nrụpụta, ụlọ ndị a na - akpọzi na corpus cavernosa aghaghị ijupụta na ọbara. Nke a na-enye aka site na mwepụ nke ọbara ọbara na-enye ọbara na ikwekọrịta nke arịa ndị na-ebute ọbara site na penis n'otu oge. Nke a na - eme ka ọbara dị n'ọbara na - eme ka e wuo ya.
Mgbe ị na-eji ya vardenafil ọnyà (224785-91-5) na-eme ka ntụrụndụ nke akwara na-eme ka mmịba ọbara dị mma n'oge agụụ mmekọahụ. N'ebe a, a na-emepụta ihe ndị na-emegharị na penis nke nitric oxide nke a tọhapụrụ. Nke a na - emepụta guanosine monophosphate cyclic (cGMP) site na enzyme guanylate cyclase.
cGMP bụ ọrụ maka ntụrụndụ na njigide nke arịa ọbara na-ebubata ọbara n'ime na site na mpempe akwụkwọ. Mgbasaa na mgbagha a na-akpata site na mmeghachi omume nke mmiri nke na-eme ka mmụba na akwara na-ebu ọbara na mgbochi na veins nke na-ebu ọbara site na mkpịsị.
Ọ bụ ọzọ enzyme phosphodiesterase-5 nke na-ebibi cGMP na arịa ndị ahụ na-alaghachi n'ọnọdụ ha. Vardenafil generic nwere ike ime ka ere ogologo oge n'ihi na ọ na-egbochi mbibi nke cGMP site na PDE-5
Ihe ị kwesịrị ịmara mgbe ị na-ewere vardenafil generic -Levitra interactions
Ndị ọrịa kwesịrị ịkpachara anya mgbe ha na-ewere Vardenafil ma soro ndị dọkịta na-arụkọ ọrụ. Ndị dọkịta chọrọ ịma ụdị nsogbu ahụ na akụkọ ihe mere eme nke ọgwụ gị ma ọ bụ ahụike gị n'ozuzu. Ndị dọkịta aghaghị ịnweta ozi gbasara nsogbu ahụ ike gị. tupu ịṅụ ọgwụ, gwa dọkịta ahụ mgbe niile ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ndị a:
Ọ bụrụ na ị nwere obi obi dịka nkụda obi, obi mgbawa ma ọ bụrụ na ị nwere obi mgbawa oge, angina. Dọkịta ahụ ga-agwa gị otu esi echedo onwe gị mgbe ị na-enwe mmekọahụ. Ikwesịrị ịgwa dọkịta ahụ ma ọ bụrụ na ị nwere ahụ mgbu, ọgbụgbọ ma ọ bụ dizziness mgbe ị na-enwe mmekọahụ.
Gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nwere mgbatị elu na ọbara mgbali elu. Ngwọta maka nrụgide ọbara nwere ike imetụta ọrụ na irè ọgwụ ọgwụ vardenafil. Ya mere ị nwere ike ịchọ nlekọta pụrụ iche site na dọkịta gị.
Ọ bụrụ na ị nwetụla ọrịa strok
Ọ bụrụ na ịchọrọ akpọnwụ akụrụ ma ọ bụ nwee nsogbu nsogbu akụrụ
Gwa ha na ha nwere ọrịa imeju. Ọrịa ọrịa imeju nwere ike imetụta dosing vardenafil. Nri ọgwụ Vardenafil nwekwara ike imetụta ọnọdụ ahụike gị ma ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa imeju. Ya mere, a ga-achọ ka ị jiri obere ọgwụ a na-aṅụ ọgwụ.
Gwa dọkịta mgbe niile ma ọ bụrụ na ị nọ n'okpuru ọgwụ ọ bụla nwere nitrates. Ikwesighi iwere vratesenafiltogether na any nitrates. Nke a nwere ike ime ka ịdaba ọbara dị egwu. Ọ bụrụ na ị ghaghị iburu nitrates ahụ, ọ ga-ewe ma ọ dịkarịa ala 48 awa mgbe ị nụsịrị ụbụrụ ikpeazụ nke vardenafil. Dọkịta kwesịrị ilekọta ya nke ọma.
Ọ bụrụ na adị adị nke ọrịa retinitis pigmentos n'ime ezinụlọ.
Ọdịdị nke ọrịa mkpụrụ ndụ na-akpọ ogologo oge QT
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na ịnụrụ ihe.
Ọ bụrụ na ị hụtụla ọhụụ dị njọ ma ọ bụ NAINON (ọ bụ na-adịghị arteritic nke na-abụghị nke na-emepụta ihe na-adịghị mma)
Ọ bụrụ na ị na-enwe ọnya afo
Ọrịa ọbara gụnyere ọrịa kansa ọbara, sickle cell anemia ma ọ bụ otutu myeloma.
Nwee ntụpọ ntụpọ nke ọdịdị dịka ọrịa Peyronie, cavernosal fibrosis ma ọ bụ angulation. Ndị nwere ọnọdụ dị otú ahụ kwesịrị nleta anya nke ndị dọkịta na-enyocha mgbe ị na-aṅụ ọgwụ vardenafil.
Ọzọkwa, gwa dọkịta ahụ ma ọ bụrụ na ị na-agbanye ụdị ọgwụgwọ ọ bụla. Nke ahụ bụ, ma ọ bụ ndị a na-edeghị akwụkwọ, ihe mgbakwasị ahịhịa ma ọ bụ vitamin. Nke a bụ n'ihi na Levitra nwere ike ịzaghachi ọgwụ ndị ọzọ ma nwee nsonaazụ dị ize ndụ.
Soro dokita nke dọkịta na-agbaso mgbe ị na-ewere Levitra.
Mgbe ị na-eji Levitra eme ihe, ị gaghị eji ọgwụ ndị ọzọ na-adịghị arụ ọrụ.
Gwa dọkịta ahụ ma ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa prostate. Ọgwụ dịka mkpụrụ okwu alpha, dịka ọmụmaatụ, doxazosin nwekwara ike ime ka mbelata ọbara ma ọ bụrụ na ejiri ya na vardenafil.
E kwesịghị iji Vardenafil gbochie igbochi ọrịa ndị a na-ebute site ná mmekọahụ. Ọ na-echebe gị pụọ na HIV / AIDS ma ọ bụ STI.
Ọ dịkwa mkpa ka ndị ọrịa mara na e nwere Levitra interactionssome nke ọgwụ ndị ọzọ yana ihe oriri na ihe ọṅụṅụ. Ndị na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime ha ma nwee ike imetụta ụzọ ị kwesịrị isi kwuo ọgwụ gị.
Mmanya-ebe ọ bụ na a maara Levitra iji mee ka ọbara mgbali elu dị ala; ekwesighi iwere ya na mmanya. Nke a bụ n'ihi na nchikota nke abụọ ahụ ga-ebuli mmetụta a elu. Nke a ga - eme ka ahụmahụ dị ka nrugwoju anya, isi ọwụwa, ịda mbà, ntutu isi ma ọ bụ ịgbagharị.
Mkpụrụ vaịn - ihe ọṅụṅụ mkpụrụ vaịn pụrụ inwe mmetụta ụfọdụ na ọgwụ vardenafil. Ọ bụrụ na ị na-ewere vardenafil na ihe ọṅụṅụ mkpụrụ vaịn, ọ ga-adị mma na ị ga-agwa dọkịta ahụ ma ọ bụrụ na ịmee mgbanwe ọ bụla na ihe ọṅụṅụ gị na nri gị.
Nri nnukwu abụba - ọ bụrụ na ị na-eri nri ndị dị elu na abụba, ị chọrọ ndụmọdụ n'aka dọkịta gị. Nke a bụ n'ihi na ụfọdụ n'ime ihe oriri ndị a nwere ike ibelata irè vardenafil
Ụtaba-A na-enyocha ụtaba na-ese anwụrụ mgbe ị na-ewere vardenafil Nke a bụ n'ihi na ụtaba nwere ike imetụta ọrụ nke ọgwụ ahụ.
Ịghọta mmekọrịta ndị Levitra n'elu ga-enyere gị aka iji nlezianya kpachara anya mgbe ị na-eji Levitra.
Edere ọgwụ dose Vardenafil n'ụzọ dị iche iche maka ndị ọrịa dị iche iche. Ihe ndenye ọgwụ ahụ na-adabere mgbe nile na ọnọdụ ahụike na akụkọ ahụike nke ndị ọrịa. N'ozuzu, ọtụtụ ndị ikom na-ewere ụkpụrụ nke 10mg. ndị nwere nsogbu ahụ ike nwere ike ịgwa ndị dọkịta ka ha were ihe na-erughị 10mg. Ndị mmadụ na ọgwụ ndị ọzọ nwere ike ịnwe ụdị ọgwụgwọ dị iche iche.
Ndị ọrịa na-aṅụ ọgwụ maka oge mbụ kwesịrị iji 10mg mee ihe nkwụsị otu ugboro kwa ụbọchị. A ghaghị iwere ọgwụ dịka otu awa tupu gị amalite inwe mmekọahụ. Dabere n'ịdị irè ọgwụ ahụ, ị ​​nwere ike ịgbakwunye 20mg ma ọ bụ belata na 5mg. 20mg kwa ụbọchị bụ usoro kachasị. Mbadamba mpempe akwụkwọ ahụ adịghị adabara dị ka nke mbụ maka ndị mmadụ na-aṅụ ọgwụ nke alpha-blockers. Ha kwesịkwara ịtụle oge oge n'etiti etiti vardenafil.
Maka ndị ọrịa 65 afọ ma ọ bụ karịa, ndị a maara dị ka geriatric usoro, a na-atụ aro na ndị dị otú ahụ na-ewere naanị 5mg kwa ụbọchị na otu awa tupu enwe mmekọahụ.
Maka ndị nwere nsogbu ma ọ bụ obere mkpịsị ụkwụ, nke kachasị mma vardenafil doses n'ihi na ha bụ mbadamba mpempe akwụkwọ karịsịa Levitra Staxyn.
Ịkwụsị ọgwụ ọjọọ nwere ike ime ka mmeghachi omume dị njọ ma mee ka mmetụta ndị dị elu dịkwuo elu. A na-adụ ndị ọrịa ka ha ghara ịṅụ ọgwụgwọ nke karịrị 20mg. ọ bụrụ na ọgwụ adịghị arụ ọrụ, ị ga-achọ enyemaka site n'aka dọkịta. Ndị dọkịta nọ n'ọnọdụ dị mma iji chọpụta ihe kpatara nsogbu gị na erection ma nwee ike ịkọwara gị nhọrọ ndị ọzọ.
E kwesịghị ịnara Levitra ihe karịrị otu ugboro n'ụbọchị. Okwesighi ekwes i iwere ọgwụ kwa ubochi.
A na-atụ anya na ndị ọrịa nile ga-enweta nsonaazụ vardenafil mgbe a gwọchara ha Na-eduzi na Uru Uru na Egwu Ejila
Levitra ọ dị mma na ime ime? Enweghị ọgwụ ọ bụla maka ụmụ nwanyị dị ime ma ọ bụ ụmụ nwanyị nọọsụ. Nke a bụ na ọ bụghị maka ụmụ nwanyị ka eji ọgwụ ahụ eme ihe.
Levitra ọ dị mma maka ụmụaka ụmụaka? Enweghi onu ogugu ozo maka ya. A gaghị eji ọgwụ a eme ihe maka ụdị a nke ndị bi na ya.
Vardenafil Mmetụta mmetụta
Ọtụtụ ọgwụ na-enwekarị mmetụta na-adịghị mma. Mmetụta dị iche iche bụ nsonaazụ na-adịghị mma site na usoro ọgwụgwọ nkịtị. Ha nwere ike ịbụ nnukwu ma ọ bụ obere, na-adịgide adịgide ma ọ bụ na-adịru oge. Ị nwere ike ịmara ụfọdụ mmeghachi omume mgbe ị Were vardenafil. Ndị na-esonụ bụ ụfọdụ mmetụta mmetụta vardenafil nke ị nwere ike ịnweta:
Nri nke ọgwụ ọjọọ nwere ike ime ka ịgba aghara.
Ị nwere ike ịnweta dizziness.
Nsogbu nwere ike ime.
Pasent iri nke akụkọ onye ọrịa na-enwe isi ọwụwa.
Otú ọ dị, ihe ndị ahụ dị n'elu, bụ ndị na-adịru nanị nanị awa ole na ole.
Vardenafil nwere ike ịkpata mmeghachi omume ndị a:
I nwere ike inwe aka, ụkwụ ma ọ bụ nkwonkwo ụkwụ.
Ị nwere ike ịnweta nsogbu na iku ume.
A na - enwekwa obi mgbawa dị iche iche.
I nwekwara ike inwe ihe mgbu n'ime obi.
Ndị ọrụ ụfọdụ na-enwekwa mmeghachi omume nro; ndị a nwere ike iduga ihu ihu, akpịrị ma ọ bụ ire, mkpuchi, ihe isi ike na iku ume. Ụfọdụ mmeghachi omume na-egbu egbu nwere ike ịgụnye mkpuchi. A ghaghị inye ọgwụgwọ mberede ma ọ bụrụ na a kọọrọ mmeghachi omume ndị a.
Nsogbu anya - Vardenafil nwere ike iduba nrịgharị ọbara anya. Nke a na - eduga na nsogbu anya na otu ma ọ bụ abụọ anya. Ndị ọrịa nwere ike ịnweta ụcha anụnụ anụnụ n'ọhụụ ma ọ bụ enweghi ike ịkọ ọdịiche dị n'etiti agba anụnụ anụnụ na agba ndụ. Ọ bụ ezie na ọ dị ụkọ, onye ọrịa nwere ike ịdaba n'ọhụụ, nke bụ ihe na - egosi ọrịa ndị dị ugbu a dika ọbara mgbali elu, cholesterol dị elu ma ọ bụ ọrịa shuga. Ndị ọrịa na-enwe ọnọdụ ndị ọzọ dị ka cholesterol dị elu, ọrịa shuga, ọrịa obi nwere ike ịnata nsogbu ọhụụ. Ndị ọzọ nwere ike ịnwe nsogbu ọhụụ gụnyere ndị mmadụ karịa afọ 50 ma ọ bụ ndị na-ese siga. Mgbe ndị ọrịa na-ahụ ụdị mgbaàmà ndị a dị ka ọhụụ ọhụụ na mberede, ha kwesịrị ịkwụsị ịṅụ ọgwụ ahụ ma chọọ enyemaka site n'aka dọkịta.
Vardenafil generic nwere ike ime ka ọnọdụ mara Priapism. A na-emebi ụda ahụ n'ihi na-eme ogologo oge na ọnọdụ a. Ndị mmadụ n'otu n'otu kwesịrị ịkọtụrụ dọkịta ma ọ bụrụ na nrụpụta dịruru ogologo oge.
Ndị ọrịa kwesịrị ịdị na-ele anya na ihe ọ bụla Vardenafil na-emetụta ma kọọrọ ha ndị dọkịta ha mgbe ọ bụla a hụrụ ha.
Ogologo oge ole ka ọ na-adịru mgbe ọ nwụsịrị Vardenafil?
Ọtụtụ ndị ọrịa na-ajụkarị oge banyere oge ị ga-enweta nsonaazụ vardenafil mgbe ha were ya. Ajụjụ ọzọ a na - ajụkarị bụ Ruo ole mgbe ka Levitra ga - adị? N'ọtụtụ ọnọdụ, ị na-amalite ịnweta mmetụta nke 15 nkeji mgbe ị gụsịrị. Nke a nwere ike, Otú ọ dị, dịgasị iche na ndị dị iche iche ma gaa na 60 nkeji. Mgbe ịṅụ ọgwụ ahụ, mmetụta nwere ike ịdịru ruo oge 4 ma ọ bụ 5. Nke a na-adịgasị iche na ụfọdụ mmadụ ma nwee ike iji oge 1 ruo ụbọchị abụọ. A na - ewerekwa oge mmetụta dịgasị iche iche na usoro ọgwụgwọ; ọ bụrụ na ị na-ewere usoro ọgwụgwọ dị nta nke Levitra, ị ga-enwe mmetụta ndị ka njọ. Otú e si ewere ya nwekwara ike imetụta oke ọrụ nke ọgwụ. Dịka ọmụmaatụ, a gwara ndị ọrịa ka ha were ya n'oge nri n'ihi na ọ na-eguzogide ihe oriri. A ghaghị izere ihe oriri dị arọ mgbe eji ọgwụ ahụ eme ihe n'ihi na ha belata ọrụ ya. ọ dịkwa mma na ị na-aṅụ mmiri buru ibu mgbe ị na-ewere ọgwụ.
Ọ bụrụhaala na e nwere ụlọ ma ọ bụ agụụ mmekọahụ, Levitra ga-anọgide na-arụ ọrụ maka mmekọahụ niile. Tebụl na-esonụ na-anọchi anya data ndị dị n'elu na oge gbasara mmekọrịta dị mma vardenafil.
Oge dị mkpirikpi iji mee ihe 15-30 nkeji
Oge a na-atụ anya ga-emetụta 60 nkeji
Oge na-adịgide adịgide 4 awa
Kwadoro ruo Otu ụbọchị abụọ
Otu esi ewe Levitra maka nsonaazụ kacha mma?
Erectile dysfunction bụ ihe dị ezigbo njọ nsogbu. Ngwọta nke nsogbu a, ya mere, choro ngwọta dị irè. Ọ nwere ike iwe iwe iji nweta ọgwụgwọ nke na-adịghị arụpụta ihe ọ bụla dị mma. Dị ka e kwuru na mbụ n'isiokwu a, ọtụtụ ihe kpatara emetụta Levitra. Ya mere, ị pụghị ịtụ anya na ọ ga-arụpụta ihe dị mma site na ị na-ebute mpi ruo minit ole na ole tupu enwe mmekọahụ. Ikwesiri ighota aro di iche iche banyere esi eme vardenafil maka uzo kacha mma. Lee ụfọdụ n'ime ihe ndị ị nwere ike ime iji nweta nsonaazụ kacha mma vardenafil.
Vardenafil dị mma maka ndị nwere ọnọdụ ndị dị na mbụ
Ụdị nri ị na-eri tupu ọgwụgwọ ahụ
Ibu nri dị arọ tupu ọgwụgwọ ahụ anaghị arụ ọrụ mgbe niile na ọgwụgwọ ọgwụ ahụ. N'ikpeazụ, ị nwere ike were Levitra Vardenafil ma ọ bụ Levitra Staxyn na nri ma ọ bụ na-enweghị nri.
1. Were ezi usoro onunu ogwu
Mkpụrụ ọgwụ Vardenafil abụghị otu maka ndị ọrịa niile. Dịka afọ gị na ọnọdụ ahụike gị dị, ọ dị mkpa mgbe ọ bụla dị mkpa maka usoro ihe eji eme ọgwụ. Nke a bụ n'ihi na ndị dọkịta maara ezigbo usoro ọgwụgwọ nke nwere ike ịrụ ọrụ kachasị mma maka gị.
2. Emela ya ngwa ngwa
Ozugbo ị na-aṅụ ọgwụ ọjọọ, adala mbà inwe mmekọahụ. Nye mmanu ahu oge zuru oke ka o rụọ ọrụ. Chere maka minit 15 ruo otu awa tupu eche echiche ịtinye usoro ọgwụ ma ọ bụ gbanwee ọgwụ.
3. Ejila dọkịta gbakwunye ya n'agwaghi dọkịta
Ọ bụrụ na ị na-echere ogologo oge ogologo oge n'enweghị ihe ọ bụla ị rụpụtara mgbe ịchọrọ vardenafil, ọ nwere ike ịbụ ihe amamihe na ị gbakwunye usoro onunu ogwu. Otú ọ dị, n'ọnọdụ dị otú a, ịkwesịrị ịgbakwunye usoro ahụ n'ejighị dọkịta gị. Nke a bụ n'ihi na mmụba na usoro onunu nwere ike ọ gaghị abụ nhọrọ kwesịrị ekwesị maka gị.
4. Atụla anya ọrụ ebube
I kwesịghị ịtụ anya inweta ụlọ nrụrụ ozugbo ị gụsịrị Levitra. Were oge ma nwee ndidi maka ihe ndị a. Ịkwesịrị ịdị na-eme ka ị nwee mmekọahụ maka gị inwe mmekọahụ. Ọ bụ agụụ mmekọahụ ka ọgwụ ahụ dị irè karị.
5. Ejikọtala ọgwụgwọ ahụ na ọgwụ ndị ọzọ
Mgbe ị na-ewere ọgwụgwọ Vardenafil, ị gaghị ejikọ ya na ndị ọzọ ọgwụ na-egbu egbu na-erectile. Nke a bụ n'ihi na ọ nwere ike ịkpata mmeghachi omume na-egbu egbu. Ọgwụ ndị ọzọ maka ọnọdụ ahụ ike ọzọ nwere ike imeghachi omume na ọgwụgwọ Vardenafil. Ya mere, ọ dị mkpa ka gị na dọkịta gị rụọ ọrụ n'oge ọgwụgwọ a.
Esi zụta Vardenafil online?
Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị mmadụ nwere ike ịhụ na ọ bụ ihe isi ike iji nweta Levitra mkpụrụ ndụ site na ụbụrụ anụ ahụ. O nwekwara ike ịbụ ihe ihere nye ụfọdụ ndị ọrịa ka ha zụta ọgwụ si n'aka ụlọ ọgwụ, ma karịsịa ma ọ bụrụ na otu nwanyị na-ere ahịa na-aga gị. Ihe ndị a na ụfọdụ ndị ọzọ nwere ike ịmanye gị ịzụta ọgwụ na ịntanetị. Ị nwere ike ịzụta Levitra online site na ọtụtụ saịtị dị na weebụ. Ịzụta Levitra online na-enweta ụfọdụ uru. Ihe ndị a bụ ụfọdụ n'ime uru ndị a:
1. More ọmụma
Ụlọ ahịa ọgwụ ọjọọ nwere ike inye ọtụtụ ozi na Levitra vardenafil na Levitra Staxyn. I nwekwara ike ịmatakwu banyere arụmọrụ erectile. Nke a bụ n'ihi na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nwere ike ịnye njikọ ebe ị nwere ike ịgụ ozi a niile. Ọkachamara nke anụ ahụ anaghị enye gị ozi dị otú ahụ.
2. Ihe di iche iche
Ịzụta Levitra n'ịntanetị na - eme ka ị nwee ọtụtụ ụdị ọgwụ. Ụlọ ahịa ịntanetị nwere ike ọ gaghị agba ọsọ nke ikpe dị otú ahụ dịka ọ na-apụ na ngwaahịa dị ka ọ nwere ike ịbụ ikpe na ụlọ ọgwụ. Ntụle na-abaghị uru nke Tadalafil Generic For ED
3. Ọnụ ahịa dị ọnụ ala
Ịzụta ihe ịntanetị ahụ nwere ike ịnye gị ọnụ ala dị ala ma e jiri ya tụnyere ụlọ ahịa ọgwụ.
Ọ dị nnọọ mfe ịzụta vardenafil online. Nke a bụ n'ihi na ị nwere ike ịhazi maka ọgwụ ọjọọ na nkasi obi nke ụlọ gị. A naghị ekpughere gị ụdị ihere ọ bụla. Ị nwekwara ike ịjụ dọkịta n'Ịntanet banyere nsogbu ọ bụla gị na-enweghị nsogbu ị na-ekwu banyere nsogbu gị.
5. Na-azoputa oge
Eziokwu ahụ na ị dịghị mkpa ịga njem iji nweta ọgwụ ma ọ bụ ọgwụ mgbe ịzụtara vardenafil na ịntanetị na-azọpụta gị ọtụtụ oge. Ị nwere ike iji oge maka ọrụ ndị ọzọ.
Otu esi zụta n'enweghị ihe ize ndụ n'Ịntanet?
Ọ dị mkpa ịnweta ya n'ime obi gị na ọ bụghị ndị na-ere ọgwụ ọntanetị nwere ike ịtụkwasị obi. Ya mere, ị ga-achọ ịma otu esi achọpụta ụlọ ahịa ịntanetị a pụrụ ịdabere na ya ka ị zere ihe ijuanya na-adịghị mma. Ịkwesịrị inweta enyemaka site na dọkịta gị tupu ịzụta online. I kwesiri iduzi nyocha ma jiri onu ozo di na ntaneti n'igwe. Iji hụ na ịzụtaghị ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ n'aka onye na-ere ọgwụ na-akwadoghị, ihe ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ị kwesịrị ịṅa ntị.
Na-azụta mgbe vardenafilwhich nwetara nkwado n'aka FDA
Zụrụ ndị na-ere ahịa vardenafilfrom bụ ndị na-eche banyere ndenye ọgwụ n'aka dọkịta.
Ị nwere ike ịkpọ ndị na-ere ahịa ma jụọ ha ajụjụ banyere nsogbu ị na-enwe.
Lelee ma ọ bụrụ na ụlọ ahịa ọgwụ dị n'ịntanetị bụ ikikere ma nwee ike ịza ajụjụ gị. Ị nwere ike ịlele nke a site na iji steeti ma ọ bụ Ngalaba Nchịkọta Mba nke Ụlọ Ọgwụ.)
Mkpụrụ ọgwụ ahụ kwesịrị ịdị na nchịkwa nwere akara aha ọma na aha doro anya.
Onye na-ere ahịa aghaghị inye nkwa maka nchekwa nke ozi kaadị akwụmụgwọ gị yana nkọwa ndị ọzọ n'onwe gị site n'inye iwu nzuzo nke doro anya.
Vardenafil online nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ ọzọ zụta vardenafil maka ọtụtụ mmadụ dị iche iche. Inwe ntụkwasị obi na onye na-ere ere n'Ịntanet bụ ihe dị mkpa dịka ịzụta ịntanetị. Na - ahọrọ onye na - ere ahịa n'Ịntanet mgbe nile na - enwe ike izute ihe niile ị chọrọ n'oge kachasị sie ike.
Ihe Maara: Vardenafil Nyocha
Levitra vardenafil na Levitra Staxyn abụwo ọgwụ dị irè maka ọtụtụ ndị ọrịa na-agbalị ịgwọ nsogbu nke arụrụ ọrụ erectile. Enwere ike ịhụ nke a site na ọtụtụ nyocha dị mma nke vardenafil sitere n'aka ndị jila ma ọ bụ na-eji ọgwụ ndị ahụ eme ihe. Ndị na-esonụ bụ ihe atụ nke ụfọdụ n'ime nyocha ndị a.
Levitra vardenafil (224785-91-5) n'ihi na erectile adịghị arụ ọrụ
RH bụ okenye nwoke 64 dị afọ iri na isii, ọ nwekwara nwunye nke 65 dị afọ iri na isii. Nsogbu nsogbu ya malitere mgbe 40 afọ nke alụmdi na nwunye ha dị ebube. O kwuru na ya enweela afọ abụọ n'enweghị ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-ejikọta ya na nwunye ya. Mgbe dọkịta ahụ gara ileta dọkịta, ọ gwara ya ka o were 20mg nke Levitra. Ọ na-ekwu na nkeji iri mgbe ọ ṅụsịrị ọgwụ ahụ, ọ na-enwe mmetụta dị ntakịrị na ihu ya ma mgbe 30 nkeji gasịrị, o nwere ike ịrụ ụlọ. '' N'abalị ikpeazụ na 8; 30 n'ehihie, m weere otu pill na otu iko mmiri, mgbe minit iri gasịrị, ihu m malitere ịmalite na-ekpo ọkụ. N'ime minit iri ọzọ, enwere m ike ịnwe 'ihe na-amalite ịmalite'. Ogologo 30 mgbe m were mpi ahụ, enwere m ihe nrụbichara nke mere m ka m bụrụ nwata.
Mmetụta nke Jehova enweghi ya ọtụtụ akụkụ ọhụụ ma e wezụga maka isi ọwụwa. R> H kwuru na ọ ga - ahọrọ ịzụta ọgwụ ndị ahụ na kọmputa n'ihi na ha dị ọnụ ala karịa; Otú ọ dị, ọ na-enwe obi abụọ banyere ụdị ọgwụ ọjọọ n'ịntanetị.
Andres bụ onye ọrụ Levitra ọzọ. Ọ bụ nwoke ọcha, nke dị afọ 49; ọ na-atụle 104kgs na enweghị nsogbu ahụike. Mgbe oge ezumike nke afọ 8, o nweghị ike ịkwado ụlọ ma nwee ọtụtụ mkparịta ụka. Andres weghaara ọgwụ nke 10mg 35 nkeji tupu ya enwee mmekọahụ. O weere mmiri ahụ na mmiri efu. Mgbe nkeji 25, o nwere ihu na-agba ọsọ ma nwee ụlọ nrụgide siri ike mgbe ụfọdụ gasịrị, nke mere ka ọ gbaa ọsọ maka minit 10 na mmekọrịta yana 15 na 25 nkeji na orgasms. Awa abụọ mgbe njedebe nke nsogbu ahụ gasịrị, o nwere isi ọwụwa na ụfọdụ dizziness. Andres nwere ekele dị ukwuu n'ihi ihe ndị ahụ pụta ma kwuo na ọ ga-esi ike ịnọgide na-enwe mmetụta dị otú ahụ na-enweghị ọgwụ. '' Echere m na m ga - enwe Levitra n'akpa m n'ihi na 'mberede' ', ka ọ na - ekwu. O kwuru na o chere na nwata 20 na onye ya na ya na-enwe mmasị na ahụmahụ ahụ.
Nke a bụ nyocha site n'aka onye ọrụ ọzọ, ndị gosipụtara aha ha. ọ na-ekwu na Levitra bụ nnukwu ọgwụ. Mgbe dọkịta gwara dọkịta gbasara nsogbu ya, ọ gwara 20mg ka ọ bụrụ onye ahụ. Ọ na - ekwu na ọ chọpụtala na Levitra rụrụ ọrụ kacha mma maka ya mgbe ọ na - eburu ya na afọ 45 tupu ya enwee mmekọahụ. Ugbu a, ọ nwere ike ịmepụta ntọala siri ike na nrụpụta ụkwụ kemgbe ọ malitere iji Levitra. O nwekwara ike inwe ihe karịrị otu nsogbu na naanị otu pill na mgbakwunye na orgasms ndị ọzọ. "Amaghị m na ụmụ okorobịa na-ahụ nke a ma mgbe ọ na-enwe mmekọahụ ma na-ewere Levitra, enwere m ike ma ọ bụrụ na ọ na-agbapụ, nwee ike inwe mmekọahụ nke abụọ na otu pill ..."
Onye ọrịa ọzọ, afọ 57 bụ onye na-arịa ọrịa shuga enweelarị ihe na-adịghị mma maka afọ abụọ. Ọ na-emekarị ka e wuo ya tupu ya enwee mmekọahụ ma nwunye ya wee nwee nkụda mmụọ. Ọ na-ekwu na ọ natawo ahụmahụ dị ukwuu kemgbe ọ gbara Levitra ikpe n'otu ọnwa anọ gara aga. O weere ọkara 20mg mbadamba ụrọ. Ugbu a, o nwere ike ịmepụta ihe na-adị n'etiti 20 na 45 nkeji. Nsonaazụ ya masịrị nwunye ya. "Nwunye m na - ekwu na aghọwo m ibu ma sie ike karia ọ na - echeta (lụrụ di na 30 + afọ)" ọ na - ekwu na ọ nwere ike ịnwe ndozi ọzọ n'ehihie nakwa n'ụtụtụ echi ya n'ejighị mgbatị ahụ. Ọ na-adụ ọdụ na a pụrụ iji ọgwụ na-eri nri ma ọ bụ n'ehihie, na-ekwu na ọ meela ka onwe ya dị ukwuu.
Levitra vardenafil na Levitra Staxyn enwere ike iji oge dị ogologo mee ihe dịka ihe ngwọta zuru oke maka ndị ikom na-ata ahụhụ site na nrụrụ erectile. Ndị ọrịa nke ọnọdụ a ga-achọkwa ịghọta na ọtụtụ ihe tinyere ahụ, physiological yana ọgwụ ndị ọzọ nwere ike inye aka na ọnọdụ a.
Ọ bụrụ na ị họrọ iji nke a dịka ihe ngwọta, ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na ịrụ ọrụ na dọkịta gị dị ezigbo mkpa. Ndị dọkịta ga-enye gị ndụmọdụ na vardenafil dosage dabere na ọnọdụ ahụ ike gị. Ya mere, ị ga-ekwupụta ozi ahụike gị gụnyere ọnọdụ ndị gara aga ị nwere ụdị ugbu a na ụdị ọgwụ ị na-aṅụ. Enweghị ike ime nke a nwere ike ịkpata mmeghachi omume ọnwụ n'etiti Levitra Vardenafil na ọgwụ ndị ọzọ.
Ihe oriri ụfọdụ dị ka mkpụrụ vaịn na ihe ọṅụṅụ dị ka mmanya na-emetụtakwa otu esi arụ ọrụ ahụ. Izi ezi nke ogwu a nwere ike ibu ezigbo ihe ngosiputa gi. Nke a pụtara ìhè site na ọtụtụ nti reviews nyochaa nke ndị ọrịa na-eji Levitra Vardenafil na Levitra Staxyn mee.
Ya mere, ya mere na ị ga-egbochi nsogbu ị na-arụ na ya. Nye Vardenafil ikpe ma sonyere ndị ọrụ obi ụtọ ndị ọzọ.
Vardenafil Levitra bibliographies
Metz Michael, W. McCarthy Barry (2004); Ịnagide Egwuregwu Erectile Dysfunction. Otu esi eme ka obi sie gi ike ma nwee ezigbo mmekorita
MSW Redner Rick, Redner Brenda (2016); Ihe Ị Na - achọghị Ịmara Banyere Erectile Dysfunction na Penile Implants. '' Ihe kpatara arụmọrụ erectile '' Px
Woo J. George; Levitra: (2018); Uses, Dosage, Ozi Na-emetụta Ọdịdị nke Levitra Vardenafil, Nke kachasị mma Iji Viagra Na Cialis Maka Erectile Dysfunction na Ebuc na-emekarị. P.1-84.
Knife Huriyyah; Levitra Vardenafil (2018): Ntuziaka zuru oke na otu esi eme ka agụụ mmekọahụ na-adịkwu mma ma nweta ahụike dị mma P1-80
Adalgar-Nkume Norman Levitra; (2018) Ntuzi zuru ezu na-eji, ngwọta. Mmetụta dị n'akụkụ nke Levitra (Vardenafil), Ihe Ngwọta Zuru Okè Iji Nwepụ Ụkwụ Erectile. p. 1-44
Dọkịta Richmond Alex (2018); Olee otú ị ga-esi zụta Levitra (Vardenafil) n'ụzọ na-adịghị ize ndụ na Ntuziaka ị ga - esi zụta Levitra Online na - enweghị Nkọwa Dọkịta + N'iji Ndazi D dị ka Cialis, Viagra, na Ndị ọzọ p.1-36
National Center for Biotechnology Information, US National Library of Medicine, PubChem, Vardenafil, Akụkụ 1, 10.
Orlistat maka ụkọ ọnwụ: Olee otú ọ ga-esi wepụ ngwa ngwa ngwa ngwa?